प्रधानमन्त्रीको प्रत्यारोपण भएकै अस्पतालमा मिर्गौला पीडित’को रुवा’बासी [भिडि’यो सहित]
March 10, 2020 3948
स्वेदशमै मिर्गौला प्रत्यारोप’ण सफल भएका कैंयौ उदाहर’णहरु छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं’ले पनि दोस्रो पटकको मिर्गौला प्रत्याराेपण त्रिवि शिक्षण अस्पताल’मा गराउनुभयो । तर, त्यही अस्पतालमा कैंयौ मृगौला रो’गी औष’धि र उप’चार नपाएर छटप’टीमा छन् ।
सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण निशुल्क हुने गरी निर्देशिकै बनाएर लागु समेत गरेको भनेको छ । तर, रकम नभएका कारण उपचा’र नपाएकाका गुनासाह:प्रशस्तै आउने गरेका छन् ।
त्रिवि शिक्षण अस्प’ताल महाराजगञ्जमा हिजो-आज यहाँ धेरै ‘भिआइपी’हरुको आवत-जावत बाक्लिएको छ ।
कार’ण, देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएर स्वास्थ्य’लाभ’मा हुनुहुन्छ । यही अस्पता’लमा सामान्य नागरिक भने खर्च अभा’वमा प्रत्यारोपण गर्न नस’क्ने अवस्था’मा भौतारिरहेका छन् ।जसमध्ये पाँचथरका ३५ वर्षीय वि’नोद कार्की भेटिए ।
उनी वैदेशिक रोजगारीमा केही वर्षअघि साउदी अरब पुगेका रहेछन् । त्यहाँ दुबै मृगौ’ला फेल भएपछि उनी स्वदेश फर्किए । लामो समयदेखि मृगौला प्रत्यारोपणको प्रतिक्षा’मा बसेका कार्की आर्थिक अभावका कारण विर’त्तिएका छन् ।उनीसँग अस्पताल’लाई बुझाउनुपर्ने रकम छैन ।
११ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ, अस्पताल’प्रत्यारोपणका लागि दिएको समय सकिसक्यो । तर, उही रकम नहुँदा निराश बन्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन, उनीसँग ।त्यसैले त कार्कीकी श्रीम’ती सोध्छिन्– ‘सरकारको (प्रधानमन्त्री) त मृगौला प्रत्यारोपण भयो, हाम्रो चाँही कहिले ?
सरकार आर्थिक सहायता गर्ने ८ रोग मध्ये मिर्गौ’ला पनि एउटा हो । २०७४ बैशाख १ गतेबा’ट त त्रिवि शिक्षण अस्प’ताल सहित देशका ५५ अस्पतालमा निशुल्क मृगौला प्रत्यारोप’ण हुने घोषणा गरिएको थियो । ‘मिर्गौला प्रत्यारो’पण निर्देशिका,’ २०७४ ले यो व्यवस्था गरेको हो ।
यसमा आवस्यक रकम अस्प’ताललाई दिने र एक(एक लाख गरी दुईपटक विरा’मीलाई:औषधिका लागि उपलब्ध गरा’उने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था’को आशामा अस्पता’लको सामाजिक इकाई समक्ष निवेदन दिएका विनो’दसँग कुर्नु बाहेक कुनै उपाय नै छैन ।
कार्की मात्र होइन, धेरै नागरि’क कार्कीकै जस्तो समस्या’बाट पी’डित छन् । त्यसैले सोध्छन्–प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो उपचा’र हुँदैन ? न्युज २४ बाट
Prevइटहरीमा दिउसै ५ लाख चोरी ( हेर्नुहोस् भिडियो सहित)
Nextहेमा श्रेष्ठले अप’शब्द बोलेको भन्दै एक व्यक्ति आए मीडियामा [ भिडि’यो सहित]
सुस्मिता ह’ त्याका आरो’पी सार्वजनिक, यसरी गरिएको रहेछ ह ‘त्या (भिडियो सहित)
ट्याक्टरले खन्दै गरेको सलमान खानको यो भिडियो भयो भाइरल (भिडियो सहित)
दुःखद खबर: दक्षिण कोरियामा एक नेपालीको मृ:त्यु